लकडाउन कार्यान्वयन गराउन अब गोलीसम्म ठोक्न सकिन्छ : सिडिओ दाहाल (भिडियोसहित) | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
लकडाउन कार्यान्वयन गराउन अब गोलीसम्म ठोक्न सकिन्छ : सिडिओ दाहाल (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : 8 April, 2020
काठमाडौं, २६ चैत्र । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले लकडाउनको आदेश पालना गराउन खरो उत्रिने बताएका छन् । उनले यो अवधिमा अनावश्यक घरबाहिर ननिस्कन समेत आम नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् । हिजो (मंगलबार) राति ८ः०० बजे प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको “जनता जान्न चाहन्छन्” कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
लकडाउनको आदेश उल्लंघन गरेर सडकमा जनता आए अब प्रशासनले आफ्नो अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्नेसमेत उनले चेतावनी दिए । उनले भने, “किनभने हामीले धेरैपटक सम्झाएका छौं । धेरैपटक अनुरोध भैसकेको छ । सम्माननीय राष्टपतिज्यूबाट पनि अनुरोध भैसकेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युबाट पनि भैसकेको छ । हामी सबैबाट भैसकेको छ । पछिल्लो समय मिडियबाट बहुत राम्रो रोल निर्वाह भएको छ । यति गर्दापनि भएन भने भोलि जीवनरक्षाको लागि हो यो त, प्रत्येक व्यक्तिको जीवन रक्षाको लागि निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुनपनि पर्नेहुन्छ । लकडाउन सफल पार्नको लागि सरकार अब कठोर साथ आउँछ ।”
सिडिओ दाहालले लकडाउन आदेश उल्लंघन गरेकै कारण फिलिपिन्सले गोली ठोकेको र भारतले पनि ड्यांग ड्यांग ठोकेको सुनाउँदै नेपालमा पनि अब त्यो विकल्प रहेको सुनाए । सिडिओ दाहालले लकडाउन पालना गराउनको लागि आफूले गोली ठोक्नेसम्मको आदेश पाएको सुनाए ।उनले भने,”मैले त्यो अधिकार पाएको छु । आदेश उल्लंघन गर्ने कसैलाई पनि छोड्दिन् ।”
त्यस्तै, उनले यो अवधिमा सवारी पास लिनेहरुको घुईँचो लाग्ने गरेको सुनाउँदै अब पास कसैले पनि नपाउने जिकिर गरे । उनले थपे,”व्यापारीलाई पास दिन्न । पासमा मलाई पत्रकारहरुले सताएका छन् । यो अवधिमा जनता टेलिभिजन नहेरेर पनि बाँच्छन् । किन टिभी हेर्नुपर्यो ? अब कठोर हुन्छु । एक्शन लिन्छु ।” यद्धपी उनले सुत्केरी, विरामीहरु र अत्यावश्य कामको लागि पास उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाए ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जानको लागि कसैलाई पनि पास नदिने उनको जिकिर छ । दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गर्नेहरु कोही पनि भोकै नमर्ने बताउँदै उनीहरुको लागि सरकारले पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था गरेको पनि सिडिओ दाहालले विश्वास दिलाए ।
महाकाली सन्धि गर्दा ओलीले के हेरेर बसेका थिए, अहिले सीमा मात्रै राष्ट्रियता मघेसीलाई संविधानमै वेइमानी?
काठमाडौं, जेठ १५ । लिम्पियाधुरा ,लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारीपछि निशान छाप
काठमाडौँ, १५ जेठ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण
काँग्रेस संस्थागत निर्णय साथ आउने स्पष्ट पार्दै देउवाले भने- नक्शा पारित गर्न संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक
काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भुभाग
संसद्को कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष पार्टीलाई थोपर्न खोजिएकामा कांग्रेसको आपत्ति
काठमाडौं, १४ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूगोल नेपालको भूभाग
डा. भीमार्जुन आचार्यको सरकारलाई प्रश्न : भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले भनेजस्तै हो त ?
काठमाडौं, १४ जेठ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको
कुन प्रदेशमा कति संक्रमित ? यस्तो छ जिल्लागत विवरण
जेठ १४, काठमाण्डौ । नेपालमा अहिलेसम्म कूल १ लाख ५८ हजार ५ सय ६४ जनाको
भोलि बजेट आउँदै : यस्ता छन् प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रहरु
जेठ १४, काठमाण्डौ । सरकारले जेठ २ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गनिर्देशनमा रहेर
बाल सचेतना केन्द्र नेपाल, बौद्धद्धारा लकडाउन अवधिभर राहत तथा उद्दार कार्यक्रम संचालन गर्ने घोषणा (विज्ञप्तीसहित)
काठमाडौं, १४ जेठ । बाल सचेतना केन्द्र नेपाल, बौद्ध, काठमाडौँले लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका विपन्न,
दल फुटाउन सकिन्छ कि भनेर भारतले आसा गर्नु वेकारः नेम्वाङ
काठमाडौं, जेठ १५ । नेकपाका नेता एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नेपालमा नेताहरुको विवादका
मृतक युवाको रिर्पोट नेगेटिभ
सुर्खेत, जेठ १५ । भारत गुजरातबाट फर्कने क्रममा मङ्गलबार राति मृत्यु भएका सुर्खेतका एक युवकको